iOS 13 - Iindaba ze-iPhone | Iindaba ze-IPhone (iphepha 2)
Abasebenzisi abaninzi abakhalaza ngokuHamba kweBhetri ephezulu besebenzisa iApple Music kwi-iOS 13.5.1
Ngaba uqaphele ukuhla kwebhetri kwi-iOS 13.5.1? Abasebenzisi abaliqela bakhalaza ngokusetyenziswa kakhulu kwebhetri yeapp yoMculo ngasemva.
Ngaba ibhetri ene-iOS 13.5.1 ikugcina ungaphantsi? Asinguwe wedwa
Ukuba kangangeeveki ezininzi, uyibonile indlela ishushu sakho esishushu ngayo kunye nebhetri ehlala ixesha elingaphantsi, kungenxa ye-iOS 13.5.1
IOS 13 ifunyenwe kwiipesenti ezingama-92 ze-iPhone iminyaka emi-4
Isabelo se-iOS 13 kwi-iPhone nakwi-iPad esungulwe kwimarike kule minyaka mi-4 idlulileyo imi kwi-92 kunye ne-93% ye-respectivam, usuku ngaphambi kokuqaliswa kwe-iOS 14
IOS 13.6 ikhumbula indawo yokufunda kwisicatshulwa esisifundayo kwiApple News
Inguqulelo entsha yeBeta ye-iOS 13.6 iphucula iApple News ukusikhumbuza apho siyeke khona ukufunda inqaku kwaye sibuyele kulo kamva.
I-beta yokuqala ye-iOS 13.5.5 ixhasa ukwaphuka kwejele kwe-unc0ver
Nangona i-iOS 13.5.1 ingasayixhaswa kwi-jailbreak, i-beta ye-iOS 13.5.5 isasekelwa.
IOS 13.6 yongeza amandla okwenza / ukukhubaza uhlaziyo oluzenzekelayo
U-Apple usandula ukukhupha iBeta yesibini ye-iOS 13.6 kuzo zombini i-iPhone kunye ne-iPad (i-iPadOS 13.6 kule meko) ...
U-Apple uyeke ukusayina i-iOS 13.5 kunye nethuba lokuthotywa ukuze usebenzise ithuba lokuqhekeka kwejele
Inguqulelo ye-iOS ehambelana nokuqhekeka kwejele yamva nje, i-iOS 13.5, ayisasebenzi ngokutyikitya iiseva zika-Apple.
I-StopCOVID, intlekele epheleleyo eqinisekisa ukuba oorhulumente abanakuthenjwa
Isicelo sokufumana umkhondo kuRhulumente wase-France siqinisekisa yonke into ekrokrelwayo: yintlekele e ...
U-Apple uyeke ukusayina i-iOS 13.4.1 emva kokukhutshwa kwe-iOS 13.5
Iiseva zika-Apple ziyekile ukusayina i-iOS 13.4.1, ke sinako ukufaka i-iOS 13.5 kuphela ukuba sibuyisela isixhobo sethu kwasekuqaleni.
Thelekisa ubomi bebhetri phakathi kwe-iOS 13.5 kunye neenguqulelo zangaphambili
Inguqulelo yamvanje ye-iOS ekhoyo ngalo mzuzu, ibonisa ukuphucuka okumangalisayo kwidatha efunyenwe yi-iPhone XR nge-iOS 13.4.1.
ISpain iya kusebenzisa iApple kunye nenkqubo kaGoogle yokulandela umkhondo wonxibelelwano
ISpain iya kukhetha iGoogle kunye neApple API yesicelo sayo sokulandela umkhondo esiya kuthi sibaluleke ukulwa ne-coronavirus
Ukuphucula i-ID yokusetyenziswa kwemaski kwi-iOS 13.5 nakwi-iPadOS 13.5 ngoku iyafumaneka
Inguqulelo entsha ye-iOS 13.5 kunye ne-iPadOS 13.5 ye-Golden Master yongeza ngokusemthethweni into entsha yokuvula i-iPhone ngesigqumathelo
Ngaba iFaceTime enabantu abaninzi iyakuqhuba uyaphambana? IOS 13.5 iya kuvumela ukukhubaza ukusondeza okuzenzekelayo
IOS 13.5 entsha, ukongeza ekusiziseleni inkqubo yendawo yeCoronavirus, isizisela ithuba lokucima ukusondeza kwiqela le-FaceTime.
Uyicima njani i-COVID-19 yokulandela umkhondo
Nge-iOS 13.5, kuza umsebenzi ophunyezwe nguGoogle kunye noApple, ukulandelela iintshukumo zabantu abanokosulelwa yicoronavirus
I-Apple ikhupha i-iOS 13.5 iBeta 3 eneZaziso ze-COVID-19
U-Apple usungule i-Beta ye-iOS 13.5 eneendaba ezinxulumene nokulwa ne-COVID-19 kunye nokuphucula ukuvula xa sinxibe imaski.
Zonke izijekulo onokuzisebenzisa kunye neTrackpad kwi-iPad
Sikubonisa zonke izijekulo zomzimba onokuzenza kunye ne-trackpad exhunywe kwi-iPad yakho, kunye nezixhobo ezinento yokwenza nokuthambeka komzimba.
I-Apple ikhupha i-iOS 13.4.1 ye-iPhone SE ngaphambi kokumiliselwa kwayo
Ukuba uyigcinile i-iPhone SE entsha, into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuyihlaziya kuhlobo olutsha lwe-iOS esandula ukwenziwa yiApple kwesi siginali.
I-Ferrite ihlaziywa ukuphucula i-trackpad kunye nokuhambelana kwemouse
I-Ferrite sisoftware elungileyo yokuhlela i-iPhoen kunye ne-iPad ehlaziyiweyo ukuba ibe yi-100% ye-trackpad kunye ne-mouse ehambelanayo.
Ukuthelekiswa kobomi bebhetri ne-iOS 13.4.1, i-iOS 13.4 kunye ne-iOS 13.3.1
Uhlaziyo lwamva nje olufumanekayo lwe-iOS, inombolo 13.4.1, aluchaphazeli ubomi bebhetri phantse kuzo zonke iimodeli ngaphandle kwe-iPhone XR.
Usihlengahlengisa njani isantya sokuphendula kwi-3D Touch kunye nempendulo ye-haptic
Ngokukhutshwa kweeOS 13, uApple wandise umsebenzi woluvo lwehaptic ukongeza iintshukumo ezikhawulezayo kunye nokunye…
U-Apple uyeke ukusayina i-iOS 13.3.1 emva kokukhupha ingxelo yokugqibela ye-iOS 13.4
Xa uyeka ukusayina i-iOS 13.3.1, akusekho lula ukufaka olu hlobo lwe-iOS kwisixhobo sakho, unokufaka i-iOS 13.4 kuphela.
I-Apple isungula i-beta yokuqala ye-iOS 13.4.5
U-Apple ukhuphe i-beta yokuqala ye-iOs 13.4.5 kunye ne-iPadOS, i-tvOS kunye ne-MacOS 10.15.5 yokulungisa iibhugi kunye nokuphucula uzinzo.
IOS 13.4 ngoku iyafumaneka kwaye iza nazo zonke ezi ndaba
Zininzi iinkampani kwihlabathi liphela ezamkele ukusebenza ngomnxeba ukuze zingayimisi ngokupheleleyo inkampani, ...
Uyicwangcisa kanjani amaqhosha emouse kwi-iPadOS
Sikubonisa indlela yokuqwalasela imouse kwi-iPad ukunika imisebenzi eyahlukeneyo kwiqhosha ngalinye, tshintsha isikhombisi kwaye usebenzise iikona ezisebenzayo.
Indawo yokufikelela ayisebenzi kakuhle kodwa isisombululo sisendleleni
Indawo yokufikelela ayisebenzi njengoko kufanelekile kodwa ingxaki sele isaziwa kuApple ngesisombululo esendleleni
Le yindlela igundane elisebenza ngayo kwi-iPadOS 13.4
I-iPadOS 13.4 isivumela ukuba sisebenzise iimpuku zeBluetooth kunye neendlela zokuhamba kunye ne-iPad yethu. Sikubonisa ukuba le nto intsha isebenza njani kwividiyo.
I-Apple isungula iBeta yesine ye-iOS 13.4 kunye namanye amaqonga
UApple usungule iBeta yesine ye-iOS 13.4, kunye ne-iPadOS, i-tvOS kunye neMacOS, okusisondeza kuhlobo lokugqibela olunokufika kule nyanga
I-Apple ilungiselela isixhobo sokubuyisela ngaphandle kwesidingo sekhompyuter
Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo u-Apple wasungula iBeta yesithathu ye-iOS 13.4, inguqulelo entsha ebandakanya iindaba ezibalulekileyo ezifihliweyo ...
IOS 13.4 iya kusivumela ukuba sikhethe umgangatho wokukhutshelwa kunye nokusasazwa kwenkqubo yeTV
I-Apple iyakuvumela ukhetho lwekhwalithi yevidiyo xa usasaza okanye ukhuphela ngeapp yeTV kwi-iOS 13.4 elandelayo.
I-WhatsApp kwimowudi emnyama ngoku iyafumaneka kwi-Beta ye-iOS
I-WhatsApp sele inendlela emnyama ekhoyo kubasebenzisi abavavanya iBeta yayo ngeTestFlight, edityaniswe ne-iOS 13
Yintoni entsha kwi-iOS nakwi-iPadOS 13.4 beta 2 ekhutshwe izolo
Yintoni entsha kwi-iOS nakwi-iPadOS 13.4 beta 2 ekhutshwe izolo. Utshintsho kumxholo weTV, ibha ye-imeyile eguqulweyo, kwaye uthumele iCarKey yakho kumyalezo.
Ungayisebenzisa kanjani into yokuThutha uLuntu kwiiMephu zeApple
Siza kukubonisa indlela esebenza ngayo ukhetho olutsha lweMephu zoThutho loLuntu, ngazo zonke iindlela onokukhetha kuzo, ezingenambalwa.
U-Apple uyeke ukusayina i-iOS 13.3 emva kokukhutshwa kwe-iOS 13.3.1
Ayisekho into yokwehla uye kwi-iOS 13.3 kuba iApple iyekile ukuyityikitya iiyure ezimbalwa.
Ezi ziindaba ze-iOS 13.4
U-Apple usungule iBeta yokuqala ye-iOS 13.4 kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye iyazisa iindaba ezinomdla, ezinye zingalindelekanga
I-Apple ikhupha ngokusesikweni inguqulelo 13.3.1 ye-iOS kunye ne-iPadOS
I-Apple isungula ngokusesikweni inguqulelo entsha ye-iOS 13.3.1 yomntu wonke onokuphuculwa kugxilwe ngqo ekulungiseni iincukuthu
Umsebenzi we-IOS 13 wolawulo lwabucala: bayasihlola kancinci ngoku
Ulawulo lwabucala kwimisebenzi ye-iOS 13: bayasihlola kancinci ngoku. Ukusukela ngo-Okthobha, idatha ye-GPS evuzayo yehle ngeepesenti ezingama-68.
Uyisebenzisa njani imeko yeKhayaKit kunye neMishini
Sichaza ukuba ungayisebenzisa njani imeko yeKhayaKit kunye neeMishini ezizenzekelayo, iinketho zokwenza ngokwezifiso abanazo kunye nemizekelo ebonakalayo.
IOS 13.3.1, i-iPadOS 13.3.1, i-tvOS 13.3.1, kunye neMacOS Catalina 10.15.3 yonjiniyela we-betas bakhululwe
I-Apple sele isebenza kwimpazamo evumela ukudlula kwimida yoNxibelelwano
Umsebenzi omtsha weMida yoNxibelelwano ubonakalisa ibug evumela abantwana ukuba badlule kuthintelo lokuthintela umnxeba
I-HomePod iphinda ihlaziye kwi-iOS 13.3
I-HomePod ikwahlaziya kwi-iOS 13.3 njengazo zonke izixhobo ze-Apple
IOS 13.3 isondele kwaye iBeta yesine iyafumaneka ngoku
U-Apple ukhuphe i-betas yesine ye-iOS 13.3, i-iPadOS 13.3, i-watchOS 6.1.1 kunye ne-tvOS 13.3, kunye neenguqulelo zokugqibela ezisondela nangakumbi.
I-Apple iqinisekisa ukuba "ibug" eqhubeka nokusebenzisa indawo okuyo yinto yesiqhelo
Ubuxoki kukuba iApple iyaqhubeka nokuqokelela indawo okuyo nangona uyikhubazile kuseto lwenkqubo, kwaye sicacisa ukuba kutheni.
I-Apple iyeka ukusayina i-iOS 13.2.2
Kwiiyure ezimbalwa, iApple iyekile ukutyikitya i-iOS 13.2.2, yiyo ke le nguqulelo ye-iOS esinokuyifaka ngeli xesha yile isayinayo ngoku: iOS 13.2.3
I-Apple iyeka ukusayina i-iOS 13.2
Iiseva zika-Apple ziyekile ukusayina i-iOS 13.2, nge-iOS 13.2.2 kuphela kohlobo olusayiniweyo ngoku.
I-beta yesibini ye-iOS 13.3 kunye ne-iPadOS 13.3 ngoku iyafumaneka kubaphuhlisi
Eyesibini i-iOS 13.3 kunye ne-iPadOS 13.3 yonjiniyela we-beta ngoku iyafumaneka kuluntu lomphuhlisi.
Ezona ndlela zingcono ze-iOS 13
Sikubonisa awona maqhinga alungileyo okuphatha i-iOS 13 njengengcali kwaye engangeni kwizihloko ezinkulu kuphononongo.
Abanye abasebenzisi bakhalaza malunga nokusetyenziswa kwebhetri ephezulu ye-iOS 13.2.2.
Kubonakala ngathi ingxelo entsha ye-iOS kunye ne-iPadOS 13.2.2 inokubangela iingxaki zokuzimela kwezinye izixhobo. Yenzeka kuwe
I-Apple isungula iBeta yokuqala ye-iOS 13.3, i-iPadOS 13.3 kunye newatchOS 6.1.1
U-Apple ukhuphe iBeta yokuqala ye-iOS kunye ne-iPadOS 13.3, iwatchOS 6.1.1 kunye ne-tvOS 13.3, okwangoku ifumaneka kubaphuhlisi.
Hayi, akukho mfuneko "yokuvala" ii -apps, nge-iOS 13.2 ukuvala ngokuzenzekelayo kuyenzeka rhoqo
I-Apple kubonakala ngathi itshintshile indlela esebenza ngayo ekulawuleni usetyenziso ngasemva nge-iOS 13.2 kwaye bavala ngokukhawuleza okukhulu.
Ulawula njani iKhayaKit ngeethegi zeNFC
Sichaza indlela esinokuthi silawule ngayo izixhobo zethu, imeko-bume kunye noomatshini bokusebenzisa ii-tag zeNFC ezilula esinokuzithenga ngemali encinci
IOS 13.2 ngoku iyafumaneka ngeFusion Fusion ye-iPhone 11
ILumaFusion yongeza inkxaso kwiidrive zangaphandle kunye neefonti zesiko
Umhleli wevidiyo weengcali, iLumaFusion ihlaziyiwe nje ukongeza ezimbini zeenoveli eziphambili esizinikwa yi-iOS 13
Ingxaki nge-chip ye-U1 ibangela ukuba i-iPhone 11 ibonise iingxaki ngokusebenza kwe-AirDrop, ngaba le yimeko yakho?
Ngaba imo emnyama ye-iOS 13 ibusindisa ubomi bebhetri? Ewe kuninzi
Imowudi emnyama evela kwisandla se-iOS 13 ivumela iimodeli ze-iPhone ngescreen se-OLED, gcina ukuya kuthi ga kwi-30% yebhetri.
Abanye abantwana bafumana yonke imingxunya kwisitshixo sokhuseleko seAirtime
I-Apple kwiziphambuka ngokungakwazi ukuqinisekisa isitshixo esenza ixesha lokuSebenzisa ngenxa yokuba abantwana befumana zonke iindlela ezimfutshane zokuvula.
Ama-55% ee-iPhones akhutshwe kule minyaka mine idlulileyo sele ene-iOS 13
I-Apple ibonisa amanani asemthethweni kwinqanaba lokwamkelwa kwenkqubo yokusebenza ye-iOS 13 kwaye oku sele kunesisa esingu-55% yetotali
I-Apple ikhupha i-iOS 13.1.3 yabo bonke abasebenzisi abanezinto ezininzi ezilungisiweyo
UApple ukhupha ingxelo entsha ye-iOS 13.1.3 enesandla esihle sokulungiswa kwe-bug. Hlaziya ngokukhawuleza okukhulu okongeza uphuculo oluninzi
I-emojis entsha kwi-iOS 13.2 Beta 2
I-Emojis eNtsha ifunyenwe kwi-iOS 13.2 entsha ye-Beta 2 yoHlaziyo loPhuculo
I-Apple isungula i-iOS 13.2 iBeta 2 ngotshintsho olunomdla
IOS 13.2 iBeta 2 isizisela iindaba ezinomdla ezinje ngeendlela ezintsha zokucima usetyenziso, ukuguqula iividiyo kunye ne-emoji entsha
I-Apple iyeka ukusayina i-iOS 13.1
Ayisekho into yokwehlisa isimbo kuhlobo lwangaphambili lwe-iOS 13.1.2, kuba ukusuka eCupertino bayekile ukusayina zonke iinguqulelo zangaphambili.
"Sayina ungene noApple" kwaphula umthetho welungelo lombhali oBlue Mail
Ukungena nge-Apple kungenza ukuba usebenzise ilungelo elilodwa lomenzi elibhaliswe ngumvelisi wesicelo seBlue Mail se-iOS kunye ne-Android.
Ungazicima njani ii -apps kwi-iPhone nge-iOS 13
Ukuba awufumananga nje indlela yokucima usetyenziso kwi-iOS 13, emva koko sichaza indlela yokwenza ngokukhawuleza nangokulula
I-Apple iyeka ukusayina iinguqulelo ze-firmware ngaphambi kwe-iOS 13.1.2
Akusekho kubuyela kwiinguqulelo ngaphambi kwe-iOS 13.1.2 ngezixhobo zethu zeselfowuni ze-Apple. U-Apple uyekile ukusayina iinguqulelo ezindala.
Ungayimamela njani irediyo nge-iPhone yakho, i-iPad, kunye neKhayaPod
IOS 13 ikuvumela ukuba umamele unomathotholo ngaphandle kwesicelo senkampani yesithathu, konke okuvela kwisicelo seApple Music uqobo.
Le yindlela iFusion Fusion esebenza ngayo kwi-iPhone 11 kunye ne-11 Pro
Isebenza njani i-Deep Fusion? Sichaza ngokweenkcukacha nangaphandle kobuchwephesha ukuba usebenza njani lo msebenzi mtsha weekhamera ze-iPhone yamva nje.
I-Apple isungula i-beta ye-iOS 13.2 nge-Fusion enzulu kunye neendaba ezininzi
I-beta entsha ye-iOS 13.2 izisa eminye yemisebenzi eyabhengezwa ngu-Apple kwi-Keynote yokugqibela kodwa esingayibonanga kude kube ngoku.
I-New York iqala ukufumana iiMephu eziPhuculweyo ezivela kwi-Apple
Ukuphuculwa kwemephu kwi-app yeeMephu ze-iOS ziqala ukufikelela kubasebenzisi abaninzi kwiSixeko saseNew York
I-Apple ikhupha i-iOS 13.1.2 kunye ne-watchOS 6.0.1
I-Apple ikhupha i-iOS 13.1.2 yokulungisa iingxaki nge-HomePod, iCloud, Ikhamera, ukulinganisa isikrini, iBluetooth kunye neeNdlela ezimfutshane.
Iapile kunye neMaroon 5 zisivumela ukuba sisebenzise ingoma yabo entsha kwisicelo seefoto
Ingoma entsha evela kwiMaroon 5 iyafumaneka simahla ngeNqaku lokukhumbula le-iOS 13 kwi-iPhone, kwi-iPad nakwi-iPod touch.
Ukukhutshwa kweApple iOS 13.1.1 Lungisa iiBugs
I-Apple ikhupha i-iOS 13.1.1 yokuLungisa iiNgozi ezahlukeneyo ngeSiri, iiKhibhodi zeQela lesiBini, iiBackups kunye noBomi bebhetri
I-Spotify ngoku ixhasa iSiri kwi-Beta yayo ye-iOS
I-Spotify sele ihlengahlengisa usetyenziso lwayo kwi-iOS 13 ukuze ihambelane neSiri, kwaye ke ikwazi ukulawula ukudlala ngomncedisi ka-Apple.
IOS 13.1 kunye ne-iPadOS ngoku ziyafumaneka ukuze zikhutshelwe
Uhlaziyo ekudala lulindelwe kwi-iPadOS ngoku lunokufakwa kwiimodeli ze-iPad ezixhaswayo, kunye ne-iOS 13.1 yee-iPhones.
Uzihlaziya njani ii -apps kwi-iPhone nakwi-iPad nge-iOS 13
IOS 13 ngoku iyafumaneka kubo bonke abasebenzisi abanee-iPhone 6s okanye ngaphezulu. Ngomntu ngamnye omtsha ...
Ungayitshintsha njani idatha ukusuka kwenye i-iPhone iye kwenye
Sichaza indlela esinokuhambisa ngayo yonke idatha ukusuka kwenye i-iPhone iye kwenye, ngaphandle kwesidingo sekhompyuter kunye nenkqubo elula kakhulu ezenzekelayo.
Lawula umsebenzi wakho wesondo nge-iOS 13
IOS 13 ngoku iyafumaneka kubo bonke abasebenzisi
Inguqulelo entsha ye-iOS 13 ngoku iyafumaneka ukuze ikhutshelwe ngoku. Musa ukulinda ixesha elide kwaye uhlaziye izixhobo zakho
Ngokukhutshwa kwe-iOS 13, ngaba ndiyayihlaziya okanye ndiyibuyise kwasekuqaleni?
Ngokukhutshwa kwenguqulelo entsha ye-iOS, abasebenzisi abaninzi bazibuza imibuzo emibini: ukuphucula okanye ukufaka ukusuka ekuqaleni. Kule nqaku sikubonisa izibonelelo kunye nokungalunganga kukhetho ngalunye
I-Apple isungula ii-betas ezintsha ze-iOS kunye ne-iPadOS 13.1
Iiyure nje ezingama-24 ngaphambi kokumiliselwa esidlangalaleni kwe-iOS 13, uApple ukhuphe iBeta yesine ye-iOS 13.1 kunye ne-iPadOS 13.1, eza kuthi ifike nge-30 kaSeptemba.
Le yindlela esebenza ngayo iApple Arcade, inqanaba leapplethi yemidlalo yevidiyo
Sivavanye iApple Arcade kwaye sakubonisa ukuba isebenza njani, ixabisa malini, luhlobo luni lwemidlalo ebandakanyayo kwaye zeziphi ezona zibalulekileyo kwikhathalogu yayo yangoku
U-Apple uqwalasele ukubakho kwemiyalezo enokucwangciswa kwi-iMessage ngokweCraig Federighi
Usekela-Mongameli oPhezulu weSoftware uCraig Federighi uqinisekisile ukuba bacinga ngokongeza imiyalezo enokucwangciswa kwi-iMessage ...
Kukho izinto ezi-5 ezintsha ze-iOS 13 ezingayi kubakho ngomhla wokuqaliswa
Kukho izinto ezi-5 ezintsha kwi-iOS 13 ezingazukubakho ngemini yokuphehlelelwa, kodwa ziya kufakwa kwi-iOS 13.1
Ungabuyela njani kwi-iOS 13 emva kokufaka i-beta ye-iOS 13.1
Ukuba ufuna ukuyeka ukuba yinxalenye yenkqubo ka-Apple ka-beta, kwaye ushiye i-iOS 13.1 kwi-beta, siza kukubonisa ukuba ungayenza njani.
Uyikhangela njani i-iPhone yakho, i-iPad okanye iMac ngaphandle kokunxibelelana kwi-intanethi
I-iOS 13 iya kukuvumela ukuba ufumane i-iPhone yakho elahlekileyo, i-iPad kunye neMac nokuba abanalo unxibelelwano lwe-intanethi enkosi kwisicelo sokuKhangela.
I-beta yokuqala ye-iOS 13.1 ngoku iyafumaneka kubaphuhlisi
Ukuba ufunda kakuhle. Le asiyompazamo kwisihloko senqaku (singabantu kwaye amaxesha ngamaxesha ...
IOS 8 Beta 13, i-iPad OS, i-tvOS 13, kunye nokubukela i-6 kubaphuhlisi
I-Apple ishiya iinguqulelo ezintsha ze-beta 8 ze-iOS 13, i-iPad OS, i-tvOS 13 kunye ne-watchOS 6 ezandleni zabaphuhlisi.
Musa ukulinda i-iOS 13 ukuya kwicala elimnyama
Musa ukulinda i-iOS 13 ukuya kwicala elimnyama. Ungabeka imowudi emnyama kwizicelo ezininzi ngaphambi kokufika kwe-iOS 13
I-beta yesi-13 ye-iOS XNUMX kunye ne-iPadOS yabaphuhlisi sele ikhutshiwe
I-beta yesi-13 ye-iOS XNUMX kunye ne-iPadOS isandula ukukhutshwa kubaphuhlisi. Olu luguqulelo lokugqibela olupapashiweyo ukuza kuthi ga ngoku.
I-beta yesithandathu ye-iOS 13 yabaphuhlisi iyafumaneka ngoku
Abaphuhlisi besicelo se-IOS ngoku bane-beta yesithandathu yenguqulo yeshumi elinesithathu ye-iOS.
I-Apple isungula iBeta 5 ye-iOS 13, i-iPadOS kunye ne-tvOS 13
I-Apple isungule i-betas entsha ye-iOS 13, i-iPadOS kunye ne-tvOS 13, ngaloo ndlela ifikelela kwi-Beta 5 kula maqonga, okwangoku kuphela ngabaphuhlisi.
Ungayidibanisa njani i-PS4 okanye i-Xbox One isilawuli nge-iOS 13
Nge-iOS 13 kunye ne-iPadOS ungasebenzisa abalawuli bePS4 kunye neXbox One kwi-iPhone yakho, kwi-iPad nakwi-Apple TV kwimidlalo ehambelana nabalawuli be-MFI
Iimephu zeApple: Umzekelo wokwenziwa kwezinto ezininzi okwenyani zizikrini kwi-iPadOS
I-iPadOS ibonelela ngokwazi ukwenza iidesktops ezahlukeneyo ngokusekwe kwimisebenzi emininzi yokwenyani ngezicelo ezahlukeneyo ezinje ngeeMephu zeApple.
IOS 13 inezaziso ezazisa ngeendawo ezingasemva
U-Apple wongeze inqaku kwi-iOS 13 apho umsebenzisi aziswa khona ukuba loluphi usetyenziso olurekhodayo indawo ngasemva.
Khuphela i-beta yesithathu yoluntu ye-iOS 13 kunye ne-iPadOS ngoku
Emva kokukhutshwa kwenguqulo yesine ye-beta ye-iOS 13 yabaphuhlisi, iApple isungula i-beta yesithathu yoluntu ye-iOS 13. Sikuxelela ukuba ungayizama njani!
Le yeyona iPadOS Multitasking
I-iPadOS isizisela uphuculo oluninzi kwimisebenzi emininzi esivumela ukuba sikwazi ukufikelela kwizicelo ezininzi ngaxeshanye, tsala izinto okanye uvule iiapps ngokukhawuleza.
Ezi ziindaba ze-iOS 13 Beta 4
Sikuxelela into entsha kwi-iOS 13 Beta 4 enjengeqhosha elitsha lokuhlengahlengisa ii-icon, ukuphuculwa kwenkqubo yealam kunye nokuphuculwa kwenkqubo ye-3D Touch.
I-Apple isungula iBeta 4 ye-iOS 13, i-iPadOS kunye ne-watchOS 6
U-Apple ukhuphe iBeta yesine ye-iOS 3, i-iPadOS, i-tvOS 13 kunye ne-watchOS 6 ngoku ezifumaneka kubaphuhlisi ababhalisiweyo.
Ezi zezona bugs zixhaphakileyo kwiimpazamo kwi-iOS 13 Beta 3
IOS 13 Beta 3 ayikho ngaphandle kweempazamo kunye neebugs ezenza ukusetyenziswa kwayo kusiba nzima, ezi zezona zixhaphakileyo esinokuzifumana kuhlaziyo lwamva nje lwenkqubo yokusebenza yenkampani yeCupertino.
I-Beta 3 entsha kunye neBeta yoLuntu yeBeta ye-iOS 13 kunye ne-iPadOS ngoku iyafumaneka
UApple ukhuphe ingxelo ehlaziyiweyo ye-iOS 13 Beta 3 ebandakanya i-iPhone 7 kunye ne-7 Plus, kunye neBeta yoLuntu yeBeta ye-iOS 13.
IOS 13 kunye neMacOS Catalina zikuvumela ukuba ungene kwi-iCloud nge-ID yobuso okanye nge-ID yokuChukumisa
U-Apple wongeza kwi-iOS 13 kunye ne-iPadOS ukukwazi ukufikelela kwiakhawunti yakho ye-iCloud kwizixhobo zakho usebenzisa i-ID yobuso kunye ne-ID yokuChukumisa.
Ezi zezona zinto ziphambili zinoveli zeNqaku leNqaku kwi-iPadOS
I-iOS 13 kunye ne-iPadOS entsha zizisa uthotho lweempawu ezintsha ezichaphazela usetyenziso lweeNqaku, eziluphucula kwaye lwenze lube bhetyebhetye ngakumbi.
Zonke izijekulo ze-iPadOS
I-iPadOS ibandakanya inani elungileyo lezimbo ezitsha ezikuvumela ukuba wenze imisebenzi ngokukhawuleza, ukwenza imisebenzi yokukhetha isicatshulwa, njl.
I-Apple yongeza ukulungiswa kwembonakalo yethu nge-FaceTime kwi-iOS 13
U-Apple wongeza inketho entsha kwi-iOS 13 elungisa ukujonga kwethu ngexesha leefowuni zeFaceTime ukuze sikwazi ukujonga omnye umntu.
I-Apple ikhupha uguqulelo lwesithathu lwe-beta ye-iOS 13, i-iPadOS, iMacOS Catalina kunye ne-tvOS 13
IOS 3, i-iPadOS, i-MacOS Catalina kunye ne-tvOS 13 beta 13 iinguqulelo ngoku ziyafumaneka kubaphuhlisi
IOS 13 ngoku ikuvumela ukuba umamele unomathotholo bukhoma ngeApple Music ngaphandle kwesidingo seapps
Izicelo zikanomathotholo zomntu wesithathu ziya kuba nenani leentsuku zabo kwi-iOS 13. I-Apple namhlanje isebenzisa izikhululo zikanomathotholo kwi-Apple Music kwi-beta yale OS
Ngoku iyafumaneka i-beta yokuqala kawonkewonke ye-iOS 13. Sikubonisa ukuba uyifaka njani
I-beta yokuqala kawonke-wonke ye-iOS 13 ngoku iyafumaneka, zombini i-iPhone kunye ne-iPad, ukuze bonke abo ...
Le yiCarPlay entsha ye-iOS 13
Siza kukubonisa olona tshintsho lubaluleke kakhulu kwiCarPlay entsha eza kufika nge-iOS 13: iimephu, umculo kunye neePodcasts zihlaziywe ngokupheleleyo
I-beta yesibini ye-iOS 13 ivumela ukuba sikwazi ukuqhagamshela kwiiseva ze-SMB ezivela kwiifayile
Nge-iOS 13 kuza kuvulwa usetyenziso lweeFayile kumaseva angaphandle enkosi kwiprotocol ye-SMB, sele ingavavanywa kwi-iOS 13 Beta 2.
IOS 13 isazisa xa kususwa usetyenziso olunomrhumo osebenzayo
Inguqulelo entsha ye-beta ye-iOS 13 isibonisa imirhumo esebenzayo xa sisusa usetyenziso kwisixhobo sethu
I-iOS 13 iBeta 2 isizisela imowudi entsha ye-Mono ePhakamileyo kunye noseto olukhanyayo kwimizobo
Abafana eApple bongeza iMono ePhambili-eNkulu kunye nezicwangciso zokukhanyisa kwimowudi yemizobo kwi-beta yesibini ye-iOS 13.
I-NFC ye-iPhone iyavula kwaye eJamani iya kuhambelana ne-DNI kunye nePasipoti yabemi bayo
EJamani, kuqinisekisiwe nje ukuba kwi-iOS 13 i-NFC ye-iPhone iya kuhambelana namaxwebhu asemthethweni okuchonga, i-ID, ipasipoti, njl.
I-hobbyist ifaka i-iOS 13 beta 1 efakwe kwi-iPhone 6
Umlandeli obanga ukuba ufake i-iOS 13 kwi-iPhone 6 kwaye uthi uzakuphehlelela i-IPSW ukuze nathi siyifakele.
Udlala njani nomlawuli wePS4 kwi-iPad yakho, kwi-iPhone nakwi-Apple TV
Ukuboniswa kwe-iPadPOS, elingana ne-iOS 13 ye-iPad, kusizisele isimanga esimnandi: I-Apple yongeze ukuhambelana ...
I-iOS 13 iya kudibanisa iiPodPods ngezibane zazo ze-LED
IOS 13 iboniswe ekuqaleni kukaJuni eWWDC, kunye neenguqulelo ezintsha zeWOSOS, tvOS, macOS ...
Le yiKhayaKit kunye neapp yasekhaya kwi-iOS 13
Sivavanye iKhayaKit kunye nesicelo seKhaya kwi-iOS 13 ngotshintsho olufakwe ngu-Apple kule nguqulo intsha ye-iPhone.
I-3D Touch ayifanga, uqinisekisa uCraig Federighi
IOS 13 ibonakala ngathi iyisusile i-3D Touch ngonaphakade, kodwa njengoko iqinisekisiwe nguCraig Federighi sisiphene kwaye iya kubuya kwiBeta elandelayo
Ividiyo ka-Apple eKit ekhuselekileyo entsha iya kufuna isicwangciso se-iCloud nge-200GB okanye i-2TB
Abafana abavela eCupertino baqinisekisa indawo yasimahla yeentsuku ezili-10 zeevidiyo eziKhuselekileyo zeVidiyo yaseKhaya ukuba nje sihlawula isicwangciso se-iCloud.
U-Apple ushiya ibhola kwinkundla yaseSpotify
UApple unike iSpotify izixhobo ukuze usetyenziso lwayo lube nemisebenzi efanayo neApple Music, ngoku yintoni?
Onke amaqhinga afakwa yiSafari kwi-iOS 13 [VIDEO]
IOS 13 "ikufutshane nekona" kwaye njengoko besithembisile ngelo xesha, siza kuzama ...
Uyisebenzisa njani imouse nge-iPad
U-Apple ugqibe kwelokuba anike ithuba lokusebenzisa imouse nge-iPad, into abasebenzisi abaninzi ebebebanga ixesha elide. Sichaza njani
IOS 13 isivumela ukuba sicime ii -apps ngokuthe ngqo kuluhlu olutsha lohlaziyo
I-Apple itshintsha indlela esicima ngayo ii -apps kwi-iOS 13, ngoku kuya kufuneka siye kwiprofayile yeVenkile yeApple ukuvuselela okanye ukucima.
Lo ngumhleli wekhusi omtsha kwi-iOS 13
Namhlanje sikubonisa ukuba zeziphi izinto ezintsha ezikhoyo kumhleli omtsha we-skrini ye-iOS 13, uyilo oluhlaziyiweyo kunye nokusebenza okutsha.
I-iOS 13 ithintela ukufikelela "kwiNqaku" kubafowunelwa
IOS 13 yongeza inqaku elitsha elithintela usetyenziso lomntu wesithathu ekufikeleleni kulwazi "Amanqaku" abafowunelwa
Ezi zezona bugs zibaluleke kakhulu kunye neempazamo kwi-iOS 13 Beta 1
Namhlanje sikuzisa uluhlu lweempazamo eziqhelekileyo kunye neebugs ebesizifumana kwi-iOS 13 ngesigaba sayo sokuqala se-beta.
UApple ubeka imiqobo engakumbi kufakelo lwee-betas ze-iOS 13 kunye ne-iPadOS
I-Apple yongeza iimfuno ngaphandle kokukhuphela kunye nokufaka iprofayili ukufaka iinguqulelo ze-beta ze-iOS 13 kunye ne-iPadOS
I-IPad ifumana inkxaso yeMouse Enkosi kwi-iPadOS
Ngokufika kwe-iOS 13 kunye ne-iPadOS, ekugqibeleni siya kuba nakho ukudibanisa imouse kwi-iPad ukuze sikwazi ukuyilawula kakuhle ngaphandle kokunxibelelana nescreen
IOS 13 kunye ne-iPadOS: Zonke iindaba ezithiwe thaca nguApple
Sele sizazi iindaba eziphambili eziza kuvela kuhlobo olulandelayo lwe-iOS 13, iindaba esikuxelela zona kweli nqaku.
Iintshukumo ezenziweyo ngu-Apple kwiiyure zokugqibela zibonisa ukuba amarhe malunga nokunyamalala kweTunes anokuqinisekiswa ngomso
Landela iWWDC 2019 bukhoma ngeendaba ze-iPhone
Landela i-WWDC 2019 bukhoma ngeendaba ze-iOS 13, i-macOS 10.15 kunye ne-watchOS 6 kwisitishi sethu se-YouTube nakwiindaba ze-iPhone.
Oko sinethemba lokukubona kwiWWDC 2019
Sishwankathela ukuba zeziphi ezona ndaba ziphambili eziza kwenziwa ngu-Apple ngoMvulo umhla we-3 kwi-WWDC 2019 kwisoftware nakwizixhobo zokusebenza.
I-iPhone entsha ayizukuzisa i-3D Touch nakweyiphi na imifuziselo
U-Apple uza kurhoxisa i-3D Touch kwiimodeli ezintsha ze-iPhone endaweni ye-Haptic Touch esele i-iPhone XR kunyaka ophelileyo.
Yonke into esiyaziyo malunga ne-iOS 13 ukuza kuthi ga ngoku
IOS 13 ikufutshane nekona ngokufika kweWWDC 2019. Sihlalutye yonke idatha esiyaziyo ngenkqubo yokusebenza ukuza kuthi ga ngoku.
iOS 13 isenokungahambelani ne-iPhone SE
I-rumor entsha iphakamisa ukuba i-iOS 13 isenokungafikeleli kwi-iPhone SE kuguqulelo lwayo lokugqibela, i-terminal ekwabelana ngesixhobo esifanayo ne-iPhone 6s
Iingcamango ezintsha kwifomathi esinokuyibona kwi-iOS 13
Olu luvo lwe-iOS 13 lubonisa izimvo ezinomdla esinokuthi sizibone njengokuyila ngokutsha izinto ezininzi okanye ubuchwephesha be-iOS.
Le ngcamango emangalisayo ye-iOS 13 ibonisa ukuhambelana okunokwenzeka neMicrosoft Mouse
Le ngcamango ye-iOS 13 ibonisa umphumo wokudibanisa iMouse yeMicrosoft kwi-iOS kunye ne-iPad, kwaye iyasebenza.
USiri unokuvela kwaye abaluleke ngakumbi kwi-iOS 13
Iingxelo zamva nje zicebisa ukuba uSiri uza kufumana isolvency enkulu kuhlobo olutsha lwe-iOS 13 eya kuthi iboniswe eWWDC 2019.
IOS 13 iya kuvumela ukungenisa iifayile ezivela kwizixhobo zangaphandle ukuya kwizicelo
I-iOS 13 iya kuba nakho ukungenisa iifoto kunye neevidiyo ezivela kugcino lwangaphandle ngokuthe ngqo kwizicelo zomntu wesithathu ngaphandle kokusebenzisa usetyenziso lweefoto
IOS 13 inokongeza inkxaso yemouse kwi-iPad
Ngokomhleli owaziwayo uFederico Viticci, iOS 13 inokongeza inkxaso kwimouse okanye kwiTrackPad.
IOS 13 izakuzisa izinto ezininzi ezintsha, ngakumbi i-iPad
Ukuvuza kokuqala kuvela malunga neendaba eziza kuvela kwi-iOS 13, uguqulelo olujolise kakhulu kuphuculo lwe-iPad
Olu lolona luvo lubalaseleyo ukuza kuthi ga ngoku nge-iOS 13 ye-iPad
U-Léo Vallet upapashe umxholo omtsha we-iOS 13. Ngeli xesha ujolise ekusebenzeni okunokunikwa i-iPad kule meko.
Le ngcamango ye-iOS 13 ibonisa zonke izinto ezinokubakho kwi-iOS
Kule ngcinga ye-iOS 13 sibona ngaphezulu kwemisebenzi emitsha engama-40 enokuthi iboniswe kwi-WWDC 2019 kunye nazo zonke iinkqubo ezisebenzayo.
Ukunikezelwa kwe-iPhone entsha eneekhamera ezintathu kunye nemowudi emnyama kwi-iOS 13
Unikezelo olutsha lwe-iPhone eya kuthi iApple izise kulo nyaka ngobunewunewu obusibonisa ukuba indlela emnyama yexesha elizayo ye-iOS 13 iya kuba njani
Inani elikhulu lezixhobo liya kusala ngaphandle kokufumana i-iOS 13 ngokungqinelana noluhlu oluhambelanayo lokuhambelana
Ngokuqinisekileyo i-iOS 13 iya kuthi thaca kwi-WWDC 2019 ngoJuni. Kwaye…
I-iOS 13 eneNdlela emnyama, i-iPhone enekhamera e-Triple kunye ne-USB-C ka-2019
IBloomberg isinika iinkcukacha ngezicwangciso zika-Apple ze-2019 kunye ne-2020, eqinisekisa ikhamera kathathu kunye notshintsho olubalulekileyo kwi-iOS 13
IOS 13 iqala ukuvela kubalo lotyelelo
Ukutyelelwa kwezixhobo ezine-iOS 13 kunyukile kwiinyanga nje ezidlulileyo, kwiiwebhusayithi eziphambili ze-Apple.
Umbono we-IOS 13: iwijethi yesikrini sasekhaya, imowudi emnyama kunye nokwenziwa ngokutsha kwesaziso
Ixesha lokuqonda liyaqala. Ngeli thuba, umxholo we-iOS 13 uboniswa ngemowudi emnyama kunye nohlengahlengiso olupheleleyo lwezaziso.